भारतमा चुनाव : कसले जित्ला ? - Sadrishya
भारतमा चुनाव : कसले जित्ला ?
-एकराज पाठक Apr 10, 2019
काठमाडौँ, २७ चैत : भारतमा लोकसभा निर्वाचनका लागि भोलिदेखि मतदान हँुदैछ । निर्वाचनको परिणामका विषयमा अनेक अड्कलबाजी र चर्चा जारी छ । निर्वाचनमा कसले जित्ला भन्ने तर्कहरुले भारतीय अखबारका पाना रंगिएका छन् । टेलिभिजनमा बिहानदेखि साँझसम्मको चर्चा पनि यही छ । तर चुनाव जित्नेको तस्बिर अझै धमिलै छ्, कसैको पक्षमा सङ्लिएको देखिँदैन ।
तर पहिलेको तुलनामा अहिले कङ्ग्रेसको गठबन्धन भने निर्वाचनको मुखमा आएर बलियो भएको महसुस गर्न थालिएको छ । कतिपय राष्ट्रिय स्तरका कलाकारहरु कङ्ग्रेसबाट निर्वाचन उठेका र छुवाछुत, जातीयता र हिन्दू कट्टरतासम्बन्धी प्रधानमन्त्री मोदी र भाजपाका कतिपय विवादास्पद अभिव्यक्तिहरुका कारण पनि कङ्ग्रेसका पक्षमा यो माहौल बन्न पुगेको जस्तो देखिएको छ । तर पनि अहिलेको निर्वाचन दलका आफ्ना मूल एजेण्डाहरु भन्दा पनि दलगत र व्यक्तिगत गालीगलौजमा ओर्लिएको देखिएको छ । यस निर्वाचनको यो अलग्गै अवस्था हो।
भाजपा र विशेषगरी मोदीमाथिको अर्काे आरोप हो हिन्दू अतिवाद । यसबाट सबैमा भाइचारा र धार्मिक सहिष्णुताको बृद्धि गरेको नभई यसले झन् मानिसमा द्वेष कलहको विजारोपण गरेको बताइन्छ । उता प्रधानमन्त्री मोदीले पनि अरु धार्मिक सम्प्रदायका नागरिकलाई होच्याउने गरेको र कङ्ग्रेसलाई हिन्दू विरोधी क्रियाकलाप गरेको भन्ने गरेका छन् । विपक्षी कङ्ग्रेसलाई सधैँ गालीगलौज गर्ने गरेको उनीमाथिको अर्काे आरोप छ । प्रतिपक्षी दल कमजोर भए पनि फकाएर र विश्वासका आधारमा काम लिनुपर्नेमा त्यसो नगरी सधैँ विपक्षीमाथि मात्र खनिने गरेको आरोप उनीमाथि छ ।
प्रधानमन्त्री र भाजपासँग कुनै एजेण्डा नभएको भनिए पनि प्रमुख विपक्षी कङ्ग्रेस पनि विपक्षीको हैसियतभन्दा कमजोर अवस्थाबाट गुज्रिएको छ । अघिल्लो निर्वाचन पछि केही विधान सभाका निर्वाचनहरुबाट आफूलाई थोरै सुधारेको देखाएको भए पनि कङ्ग्रेसले पनि आसन्न निर्वाचनमा आफैँ या आफ्नो गठबन्धनले निर्वाचन जित्ने र सरकार निर्माण गर्न सक्ने अवस्था अहिले नै देखिँदैन । कङ्ग्रेस र उसको गठबन्धनले जितेमा प्रधानमन्त्री को हो भन्ने बारेमा अहिले नै स्पष्ट बाहिर आउन नसक्नुलाई पनि कङ्ग्रेसको कमजोर अवस्थाकारुपमा हेर्न सकिन्छ ।
पछिल्लो समय सोनिया गान्धीकी छोरी प्रियंका गान्धीको चर्चाले त्यहाँको निर्वाचन अभियानमा केही तताएको छ । त्यस्तै कतिपय चर्चित कलाकारहरु पनि कङ्ग्रेसबाट निर्वाचन उठ्नेमा दर्ज भएका छन् । यसको माहौल पनि त्यत्तिकै छ । तर पनि यत्तिले मात्र कङ्ग्रेसको पक्षमा माहौल बनाउन पूरै रुपमा सघाउँछ भन्न सकिँदैन । सोनियाको आकर्षण देखिए पनि राहुलको विश्वसनीय र परिपक्व चुनावी वातावरण बन्न सकेको देखिन्न । अनि नेतृत्वबाट भाजपाका विरुद्ध राष्ट्रलाई स्पष्ट र भरपर्दाे नेतृत्व एवम् एजेण्डा दिनसक्ने जस्तो अहिले नै देखिँदैन । कङ्ग्रेसलाई सधैँ लाग्ने नै गरेका आरोपहरु जस्तो परिवारवादी, पुरातनपन्थी, हिन्दूधर्म विरोधी आरोप अहिले पनि लागेकै छ । जुन कुराहरु अहिले पनि भाजपाका एजेण्डा नै बनेका छन् ।
त्यसैले यी सबै माथिका अवस्था र परिस्थितिहरुको मिहिन विश्लेषण गरी हेर्दा भारतमा अहिलेको सत्ता राजनीतिमा आगामी निर्वाचनले आमूल परिवर्तन ल्याउँछ भन्न सकिँदैन । अहिले जे जस्ता प्रश्न उठेको भए पनि अर्काे नेतृत्वमा पनि भाजपाकै सम्भावना बढी देखिन्छ । तर पनि अहिलेको जस्तो स्पष्ट बहुमत नल्याए पनि सरकार निर्माण गर्नसक्ने सामान्य बहुमतमा भाजपाको गठबन्धन नै अगाडि देखिन्छ । जनसंख्या र भूगोलकै हिसाबले विश्वको ठूलो प्रजातन्त्र ठानिने भारतमा हुन लागेको यस आमनिर्वाचनको चासो भारतमा मात्र सीमित हँुदैन, यसको हारजितले सिङ्गो दक्षिण एसियालाई नै कुनै न कुनै रुपमा प्रभाव पार्न खोज्दछ । यसकारण पनि भारतको चुनावी चर्चा बढी नै हुने गर्दछ ।(रासस-पाठक राससका कार्यकारी सम्पादक हुनुहुन्छ ।)
Apr 19, 2019 पृथ्वीको एक परिक्रमा एक वर्ष
Apr 18, 2019 क्रिकेटमा राजनीतिक छाया
Apr 17, 2019 कम्युनिष्ट कुहिने प्रतीक्षामा काङ्ग्रेस